Akhriska Kitaabka Quduuska ah ee Maalinlaha ah maanta oo ah 27ka Oktoobar 2018 | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Qorshaha akhrinta Baybalka Akhriska Kitaabka Quduuska ah ee Maalinlaha ah Maanta oo ah 27ka Oktoobar 2018
Akhrinteenna buugga maalinlaha ah waxaa laga soo qaatay 2 Taariikhdii 17: 1-19, 2 Taariikhdii 18: 1-34. Akhri oo barakee.
Akhrinta Baybalka maalinlaha ah
2 Taariikhdii 17: 1-19:
Oo waxaa meeshiisii ​​boqor ka noqday wiilkiisii ​​Yehooshaafaad, oo wuxuu u xoogaystay si uu dadka Israa'iil isaga daafaco. 1 Oo wuxuu ciidan fadhiisiyey magaalooyinkii deyrka lahaa oo dalka Yahuudah oo dhan, oo rugo askareedna ayuu dhex dhigay dalkii Yahuudah iyo magaalooyinkii reer Efrayim oo aabbihiis Aasaa uu mar hore qabsaday. 2 Oo Rabbiguna Yehooshaafaad wuu la jiray, maxaa yeelay, wuxuu ku socday jidkii hore oo awowgiis Daa'uud, oo Bacaliimna ma uu doonin, 3 laakiinse wuxuu doonay Ilaahii awowgiis, oo wuxuu ku socday amarradiisii, mana uu yeelin falimihii dadka Israa'iil. 4 Oo sidaas daraaddeed Rabbigu boqortooyadii gacantiisuu ku xoogeeyey. oo dadkii dalka Yahuudah oo dhammuna waxay u keeneen Yehooshaafaad hadiyado. oo isagu wuxuu lahaa maal iyo sharaf badan. Oo qalbigiisuna wuxuu u sara kacay inuu qaado jidadka Rabbiga, oo weliba wuxuu dalka Yahuudah ka qaatay meelihii sarsare iyo geedihii Asheeraah. 5 Oo haddana sannaddii saddexaad oo boqornimadiisa ayuu u diray amiirradiisii, oo ahaa Benhadil, iyo Cobadyaah, iyo Sekaryaah, iyo Netaneel, iyo Miikaayaah inay magaalooyinka dalka Yahuudah wax ku baraan. Oo wuxuu la diray kuwii reer Laawi oo ahaa Shemacyaah, iyo Netanyaah, iyo Sebadyaah, iyo Casaaheel, iyo Shemiiraamood, iyo Yoonaataan, iyo Adoniiyaah, iyo Toobiyaah, iyo Toob Adooniyaah, oo waxaa iyaga la jiray Eliishaamaac iyo Yehooraam wadaaddada. 6 Oo iyana dalka Yahuudah ayay dadka wax ku bareen iyagoo wata kitaabkii sharciga Rabbiga, oo waxay ku dhex wareegeen magaalooyinkii dalka Yahuudah oo dhan, oo dadkiina wax bay bareen. Oo boqortooyooyinkii dalalkii ku wareegsanaa dalka Yahuudah oo dhan waxaa ku dhacday Rabbiga cabsidiisii, oo sidaas daraaddeed iyagu Yehooshaafaad lama ayan diririn. 7 Oo reer Falastiin qaarkood ayaa Yehooshaafaad u keenay hadiyado iyo lacag lacag ah, oo reer Carabtiina waxay u keeneen adhi badan oo ah toddoba kun iyo toddoba boqol wan, iyo toddoba kun iyo toddoba boqol oo orgi. 8 Oo Yehooshaafaadna aad iyo aad buu u sii weynaaday; Oo wuxuu dalka Yahuudah ka dhex dhisay qalcado iyo magaalooyin wax lagu kaydiyo. 9 Oo magaalooyinka dalka Yahuudah waxaa loogu dhex sameeyey shuqullo badan, oo Yeruusaalemna waxaa u joogay rag dagaalyahan ah oo xoog badan. Oo tanuna waa tiradoodii iyo sidii reerahoodu ahaayeen, oo reer Yahuudahna waxaa u taliya kun kun u taliya. Oo waxaa isaga la jiray Adna oo madax ahaa, oo waxaa isaga la jiray rag xoog badan oo ah saddex boqol oo kun. Oo isna waxaa ku xigay Yehooxaanaan oo sirkaal ahaa, oo waxaa isaga la jiray laba boqol iyo siddeetan kun oo nin. Oo isna waxaa ku xigay Camasyaah ina Sikrii oo Rabbiga ikhtiyaarkiisa isugu bixiyey, oo waxaa isaga la jiray laba boqol oo kun oo ah rag xoog badan. 10 Oo reer Benyaamiinna; Oo Elyaadaacna wuxuu ahaa nin xoog leh, oo isna waxaa la jiray laba boqol oo kun oo nin oo sita qaanso iyo gaashaan, 11 oo isna waxaa ku xigay Yehoosaabaad, oo waxaa isaga la jiray boqol iyo siddeetan kun oo nin oo loo diyaariyey dagaalka. 12 Oo kuwanu waxay ahaayeen intii boqorka u adeegi jirtay, oo ayan ku jirin kuwii uu boqorku fadhiisiyey magaalooyinkii deyrka lahaa oo dalka Yahuudah ku yiil oo dhan.
2 Taariikhdii 18: 1-34:
1 Haddaba Yehooshaafaad wuxuu lahaa maal iyo sharaf badan, xidhiidh buuna la yeeshay Axaab. 2 Oo dhawr sannadood dabadood isagu wuxuu Axaab ugu tegey Samaariya. Oo Axaabna isagii iyo dadkiisii ​​la socdayba wuxuu u qalay ido iyo dibi faro badan, oo wuxuuna isagii oggolaysiiyey inuu ula kaco Raamod Gilecaad. 3 Markaasaa Axaab oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil Yehooshaafaad oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah ku yidhi, Ma ii raacaysaa Raamod Gilecaad? Oo isna wuxuu ugu jawaabay, Anigu kula mid baan ahay, oo dadkayguna waa dadkaagoo kale, oo annaguna dagaalka waan kula jirnaa. 4 Markaasaa Yehooshaafaad boqorkii dalka Israa'iil ku yidhi, Waan ku baryayaaye bal maanta erayga Rabbiga wax weyddii. 5 Sidaas daraaddeed boqorkii dalka Israa'iil wuxuu soo wada ururiyey nebiyadii oo ahaa afar boqol oo nin, oo wuxuu ku yidhi, Raamod Gilecaad dagaal ma u tagnaa mise waan iska daayaa? Oo iyana waxay ku yidhaahdeen, Tag. waayo, Ilaah wuxuu iyada soo gelin doonaa gacantaada, boqorow. 6 Laakiinse Yehooshaafaad wuxuu ku yidhi, Kuwan mooyaane miyaanu nebiga Rabbiga jirin aan wax weyddiinnee? 7 Oo boqorkii dalka Israa'iil wuxuu Yehooshaafaad ku yidhi, Weli waxaa jira nin kale oo aan Rabbiga wax ka weyddiin karno. waayo, isagu wax wanaagsan buu iga sii sheegay wax sii sheegeen, laakiinse had iyo goorba waa shar. Isagu waa Miikaayaah ina Yimlaah. Markaasaa Yehooshaafaad wuxuu yidhi, Boqorow, saas ha odhan. 8 Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil u yeedhay mid sirkaal ah, oo wuxuu ku yidhi, Haddiiba ii keen Miikayhuu ina Yimlaah. 9 Oo boqorkii dalka Israa'iil iyo Yehooshaafaad oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah mid kastaaba wuxuu ku fadhiyey carshigiisii, isagoo dharkii boqornimada qaba, oo waxay fadhiyeen meel bannaan oo ku taal iridda Samaariya laga soo galo. oo nebiyadii oo dhammuna hortooday wax ku sii sheegayeen. 10 Oo Sidqiyaah ina Kenacanaah ayaa samaystay geeso bir ah, oo wuxuu yidhi, Waxaa Rabbigu leeyahay, Kuwan waad ku hardiyi doontaa reer Suuriya ilaa ay wada baabba'aan. 11 Oo nebiyadii oo dhammuna saasay sii wada sheegeen, iyagoo leh, Raamod Gilecaad tag oo guulayso, maxaa yeelay, Rabbigu wuu soo gelin doonaa gacantaada, boqorow. Oo wargeeyskii Miikayhuu loo diray inuu u soo yeedho wuu la hadlay oo ku yidhi, Bal eeg, nebiyadii war wanaagsan bay u sheegeen boqorkii, oo isku af bay ku wada hadleen. Haddaba waan ku baryayaaye hadalkaagu ha noqdeen sida kuwo kale oo wax wanaagsan ku hadal. 13 Markaasaa Miikayhuu yidhi, Rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye waxaan sheegayaa wax alla wixii Rabbigu yidhaahdo. Oo markuu boqorkii u yimid ayaa boqorkii ku yidhi, Miikayhuuyow, Raamod Gilecaad dagaal ma u tagnaa mise waan iska daayaa? Oo isna wuxuu ku yidhi, Taga oo ku soo guulaysta, oo iyagana gacantiinnaa la soo gelin doonaa. 15 Markaasaa boqorkii isagii ku yidhi, Runta mooyaane wax kale inaadan magaca Rabbiga iigu sheegayn intee jeer baan ku dhaariyaa? 16 Oo isna wuxuu yidhi, Waxaan arkay dadka Israa'iil oo dhan oo buuraha ku kala firdhay sidii ido aan adhijir lahayn. haddaba nin waluba gurigiisii ​​ha ku nabad noqdo. 17 Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil Yehooshaafaad ku yidhi, Miyaanan kuu sheegin inuusan wax wanaagsan iga sii sheegayn wax shar ah mooyaane? 18 Oo haddana wuxuu mar kale ku yidhi, Bal maqal erayga Rabbiga. Waxaan arkay Rabbiga oo carshigiisa ku fadhiya oo ciidankii samada oo dhammuna taagan yihiin midigtiisa iyo bidixdiisa. 19 Markaasaa Rabbigu yidhi, Kumaa Axaab oo ah boqorka dalka Israa'iil soo sasabaya inuu Raamod Gilecaad tago oo halkaas ku dhinto? Oo mid sidanuu ku hadlay, mid kalena sidaasuu ku hadlay. 20 Markaasaa ruux soo baxay oo Rabbiga hortiisa istaagay, oo yidhi, Anigaa soo sasabaya. Kolkaasaa Rabbigu ku yidhi, Sidee baad u soo sasabaysaa? 21 Isna wuxuu yidhi, Anigu waan tegayaa oo waxaan noqonayaa ruux beenlow ah oo afka nebiyadiisa oo dhan ku jira. Oo Rabbigu wuxuu yidhi, Adigu waad sasabi doontaa oo weliba waad ka adkaan doontaa, haddaba tag oo saas yeel. 22 Haddaba bal eeg, Rabbigu afka nebiyadaadan wuxuu geliyey ruux beenlow ah, oo Rabbigu wuxuu kaa sheegay wax belaayo ah. 23 Markaasaa Sidqiyaah ina Kenacanaah intuu Miikayhuu u soo dhowaaday dhabanka ku dhuftay, oo wuxuu ku yidhi, War ruuxii Rabbigu xaggee buu iga maray inuu kula hadlo? 24 Kolkaasaa Miikayhuu yidhi, Waad arki doontaa maalinta aad qol hoose u geli doonto inaad ku dhuumato. 25 Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil yidhi, Miikayhuu qabta oo u celiya Aamoon oo ah taliyaha magaalada, iyo Yoo'aash oo ah ina boqor; Oo waxaad ku tidhaahdaan, Boqorkii wuxuu leeyahay, Ninkan xabsiga geliya, oo waxaad ku quudisaan kibis dhib ah, oo waxaad ka waraabisaan biyo dhib ah, ilaa aan soo nabad noqdo. 27 Markaasaa Miikayhuu ku yidhi, Sinaba haddaad ku soo nabad noqotid, Rabbigu igama dhex hadlin. Oo wuxuu yidhi, Dadkoo dhammow, maqla. 28 Markaasay boqorkii dalka Israa'iil iyo Yehooshaafaad oo ahaa boqorkii dalka Yahuudah Raamod Gilecaad u kaceen. 29 Oo boqorkii dalka Israa'iil wuxuu Yehooshaafaad ku yidhi, Anigu waan ismidab qarinayaa oo dagaalkaan dhex gelayaa; Laakiin adigu khamiiskaaga gasho. Oo boqorkii dalka Israa'iil wuu ismidab qariyey oo iskutallaab buu u noqday. oo dagaal bay u baxeen. 30 Haddaba boqorkii Suuriya wuxuu amray saraakiishii u taliyey gaadhifardoodkiisa, oo ku yidhi, Mid weyn iyo mid yar toona ha la diririna boqorka dalka Israa'iil oo keliya mooyaane. 31 Oo markii saraakiishii gaadhifardoodku ay Yehooshaafaad arkeen ayay isyidhaahdeen, Kanu waa boqorkii dalka Israa'iil. Sidaas daraaddeed way hareereeyeen inay la diriraan, laakiinse Yehooshaafaad wuu qayliyey, oo Rabbiguna wuu caawiyey, oo Ilaah baa iyagii ka ceshay inay isaga ka fogaadaan. Oo markii saraakiishii gaadhifardoodku ay arkeen inuusan ahayn boqorkii dalka Israa'iil ayay dib uga noqdeen lasocodkiisii. 33 Oo nin baa intuu qaansadiisii ​​xooday kama 'ahaan fallaadh u ganay, oo wuxuu boqorkii dalka Israa'iil kaga dhuftay meesha dharkiisa dagaalku isaga yimaadeen. Markaasuu boqorku kii gaadhifaraskiisa kaxaynayay ku yidhi, Gacantaada leexi, oo ciidanka iga dhex bixi, waayo, aad baan u dhaawacmay. waayo, waan dhaawacmay.
article PreviousAkhrinta Kitaabka Quduuska ah maalin walba 26ka Oktoobar 2018
Next articleAkhrinta Kitaabka Quduuska ah maalin walba 28ka Oktoobar 2018
30 Salaadiinta Aasaasiga Aasaasiga ah
Ducada Salaadda ee Injiilka
U Ducada Kuwa Looyaqaano Maandooriyaha